Intellectual property kwi-Russia - Iinkonzo - Accountant Us
Russian IP umyalelo wokhuselo ilawulwa yi-Inxalenye IV ye-Russian Zasekuhlaleni Ikhowudi, ezithile federal imithetho kunjalo dozens ngamazwe treaties kwi-intellectual ipropati amalungelo watyikitywa Saserashiya.
Umzekelo, Inkundla kuba Intellectual Property Amalungelo yamiselwa kwi-Russia kwi- kuphela kwiminyaka emithathu edlulileyo. Le inkundla uqwalasela exclusively disputes enxulumene intellectual property amalungelo nokuba amaqela abandakanyeka ityala waza wakhonza njengoko wo- isehlo ngokunjalo cassation inkundla kuba naziphi iimeko ukuba examines okanye ukuba ezicingelwa nangayiphina enye imeko abarhwebayo inkundla kwi-Us.
Russian IP imithetho ukulawula i-patents ebhalisiweyo kuba inventions, into eluncedo models kwaye mveliso designs
Patents ingaba esikhutshwe Federal Inkonzo ye-Intellectual Property, Patents kwaye iimpawu zokurhweba, awathi kanjalo eliphathiswe nokubhalisa iimpawu zokurhweba kwaye inkonzo marks. Ngokungafaniyo inkampani amagama, urhwebo amagama okanye abarhwebayo designations kufuneka ndivuma ukuba abe ebhalisiweyo okanye abe obaluliweyo yenkampani inkqubo esisinyanzelo amaxwebhu. Ilungelo inkampani gama livela njengoko kamsinya njengoko isemthethweni iqumrhu sibhaliswe kunye Urhulumente Bhalisa neenkqubo Zomthetho Karhulumente. Inkampani igama leyo yinxalenye urhwebo igama okanye trademark ngu ezikhuselweyo kwi-Russia nokuba okukhusela i-urhwebo igama okanye trademark ngokwayo. Ummandla amagama ingaba regulated ngokwahlukileyo njengoko Russian Zasekuhlaleni Ikhowudi akusebenzi aqonde kubo njengoko intellectual property nangona inani elandayo inkundla disputes enxulumene ummandla amagama ngenxa inkulu indima idlalwe nge-intanethi kuzo zonke iindawo ebomini bethu. Ezahluka-hlukileyo imigaqo ikwasebenza kwezinye intellectual property: uyazi njani (urhwebo secrets), i-software kwaye isiseko sedata, copyrights kwaye enxulumene amalungelo, iphepha-mvume izivumelwano kwaye yabasebenzi ke okwenzeke. Kubalulekile ukukhumbula ukuba infringement ka-intellectual property amalungelo entails zasekuhlaleni, kwezolawulo kunye nkqu-mthetho eyimali. Abalawuli iinkampani unoxanduva, umzekelo, kuba usebenzisa omnye yequmrhu trademark babe ngenene kwezinye iimeko abe phantsi, ulwaphulo-mthetho eyimali. Njengoko kuba zasekuhlaleni eyimali ulungiso, baye unakho ukufikelela ukuya kwi-RUB amahlanu ezigidi kuba intlawulo okanye umonakalo othe olukhawulezileyo lwemali, imbuyekezo okanye phinda kabini ziyabhatalwa royalties phantsi efanayo iimeko. Entsha imigaqo kwi ubhaliso iimpawu zokurhweba kwaye ufumane iphepha-mvume izivumelwano kunye Federal Inkonzo ye-Intellectual Property, Patents kwaye iimpawu zokurhweba waba ungeniswa kutsha nje ngoko ke kubalulekile vital kwi-enjalo enobunzima-bume apho imithetho yomdlalo ingaba ukutshintsha ngoko ke rapidly ukuba ingaba abaqondisi-mthetho lisondele ilungile ukukhombisa u-na imicimbi kwi elifutshane isaziso. Russian Accountant abaqondisi-mthetho ukusebenza ngokusondeleleneyo kunye uninzi reputable patent attorneys kwi-Russia ngokunjalo ngosuku lwehlabathi wentengiso kwaye ingaba ukulungele ukuba ufuna inkxaso kwi-imicimbi enxulumene okukhusela IP amalungelo. Siya kuba ninoyolo ukuba kukunceda: Thina kakhulu ekhangele phambili ngokuxoxa na yakho isemthethweni amatyala ethu kwi-ofisi Moscow kwaye Ngcwele Marengo
Ukuze ufumane mortgage imali - Russian uguqulelo - Russian abaqondisi-mthetho